ကဗျာ | အံ့ဘုန်းမြတ်
သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အားလုံး ကြမ်းပြင်ပေါ်ပုံကျသွားကြပြီ။
ရုပ်ဖျက်ထားတဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုလို တိတ်ဆိတ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ သူမ
အဲ့ဒီခဏ၊ ငါ့ကိုငါ မေ့လျော့သွားခဲ့တယ်
နှင်းဆီပွင့်ဖက်လေးတစ်ခုကို မနက်ခင်းလေပြည်က နိုးထစေသလိုမျိုး
ငါ့နှလုံးသားထဲမတော့ တောမီးလောင်သွားစေမယ့် မုန်တိုင်းတစ်ခုလိုမျိုး
ထားလိုက်၊ ဘယ်သူမှ မငြိမ်းသတ်လိုက်ကြပါနဲ့။။။။။။
သူမရဲ့ အနမ်းတွေကို ငါယုံကြည်တယ်
ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ အိပ်မက်တချို့ကို ငါ့နှလုံးသားထဲမှာ စိုက်ပျိုးခဲ့လိမ့်မယ်လို့
ရေခဲတောင်တစ်ခုကိုတောင် အရည်ပျော်သွားစေမယ့် နှုတ်ခမ်းတစ်စုံနဲ့
ငါ့နှုတ်ခမ်းတွေက ငါ့ကို ပြန်ပြောနေရဲ့
ရုတ်တရက် တွန်းဖယ်ပစ်လိုက်တဲ့ ငါ့လက်ချောင်းတွေကို
ပြီးတော့၊ အဖျားတက်တုန်ရီနေတဲ့ မေးခွန်းတွေ
သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖျားကနေ ထွက်ကျလာတော့တယ်။။။။။။
မြစ်တွေထက်ရှည်လျားတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ငါ ရှင်းပြနေသေးရဲ့
အဲ့ဒီ အေးစက်စက် ပလပ်စတစ်အရေခွံတစ်ခုအကြောင်း
ဒါပေမယ့်၊ သူမကတော့ အခိုင်အမာယုံကြည်နေဆဲပေါ့
ဒါတွေဟာ သူမခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တောက်ပတဲ့အသားစတွေလို့။။။။။။။။
အဲ့ဒီနောက်တော့ သူမရဲ့ကိုယ်ပေါ်က ပလပ်စတစ်အရေခွံတစ်ခုက
သူမနဲ့ ငါ့ကြားမှာ မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာစေတော့တာပါပဲ။
နောက်ထပ်လည်း နှလုံးသားပေါင်းများစွာ ။။။။။။
မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတချို့ကို ရေနဲ့သန့်စင်လိုက်တယ်
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သူမရဲ့ ပလပ်စတစ်အရေခွံကိုတော့
စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ ငါ့ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရဲ့
အဲ့ဒီနောက် အရင်နေ့များစွာအတိုင်း အခန်းအပြင်ကို ထွက်သွားတော့တယ် ။။။။။။
သူမ ဘယ်ကိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာ ငါ မသိဘူး
စာသင်ကျောင်းတွေဆီကိုလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘုရားကျောင်းတွေဆီကိုလား
ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ယဉ်းကျေးမှုအခမ်းအနားတစ်ခုခုဆီ
သူမပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ ပိုပြီးထူထပ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပလပ်စတစ်အရေခွံတွေ
သူမကိုယ်ပေါ် ကပ်ပါလာမယ်ဆိုတာပါပဲ ။။။။။။။။။။
ဒါ အေးစက်တဲ့ ပလပ်စတစ်အရေခွံတစ်ခု ပြန်ရောက်လာတာ
နောက်ဆုံးတော့ ငါ ရွံရှာဖူးတဲ့ တခြားသောသူတွေအတိုင်းပေါ့
သူမကိုယ်ပေါ်မှာလည်း ထူထပ်တဲ့ ပလပ်စတစ်အရေခွံတစ်ခုက
သူမလျှောက်လာတယ်။ အိပ်ရာပေါ် လဲကျနေတဲ့ ငါဆီ
သူမပြောနေရဲ့၊ ပလပ်စတစ်အရေခွံတတ်ထားတဲ့ စကားလုံးတချို့နဲ့
သူမနမ်းလိုက်ရဲ့၊ ပလပ်စတစ်အရေခွံတတ်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့
ပြီးတော့ ငါ့ကိုချစ်နေရဲ့၊ ပလပ်စတစ်အရေခွံတတ်ထားတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့ ။။။။။။။
ငါလိုချင်တာ မိတ်ကပ်လိမ်းထားတဲ့ နှင်းဆီပွင့်တွေ မဟုတ်ဘူးလို့
ပြီးတော့ သူမကိုယ်ပေါ်က ပလပ်စတစ်အရေခွံကို ငါ့လက်ချောင်းတွေနဲ့
သူမယုံကြည်ထားသလို လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သွေးတစ်စက်မှ ထွက်ကျမလာဘူး
အသားစတွေစုတ်ပြဲသွားသလို နာကျင်စွာအော်ဟစ်နေလေရဲ့ ။။။။။
ပြီးတော့ ငါ့ကိုအတင်းအကျပ် ဖက်တွယ်ထားရင်းက သူမ ငိုကြွေးနေ
နောက်တော့ ငါ့ပုခုံးပေါ် သူမရဲ့ မျက်ရည်တချို့ လိမ့်ဆင်းလာတော့တယ်
လူသားရဲ့ အစစ်အမှန် မျက်ရည်စက်တွေ ဖြစ်နေပြန်ရဲ့ ။။။။။။။။။။။
(မှတ်ချက်။ ။ ဆရာမြင့်မိုးအောင်ရေးသားခဲ့သော ၁၉၉၀-၁၉၉၁ မှ ကဗျာများကိုစုစည်းထုတ်ဝေသည့် “အမဲလိုက်အက” ကဗျာစာအုပ်မှ “ပလပ်စတစ်အရေခွံ” ကဗျာကို ပြန်လည်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် ကိုးကားချက် ကိုဖော်ပြပြီး လွတ်လပ်စွာ ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါသည်။)
ဒီနေ့ ငရဲပြည်က ပြန်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က
ငရဲသားချင်းချင်း ကိုယ့်အသားကိုယ်ပြန်စားလို့လေတဲ့ ။။။။
အဲ့ဒါက ကဗျာပဲဗျ ။။။။
နောက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ဈေးပေါတယ်ဗျ..
ဒါတော့ ကဗျာတပုဒ်စာရှိပြီ ။။။။
ဒါပေမယ့် ငရဲပြည်ကို ငရဲပြည်လို့
ငရဲပြည်ကို အာရုံသိနဲ့သိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ် ။။။။
အာရုံသိနဲ့ ငရဲပြည်ကို မခံစားတက်မချင်း
လှမ်းရေးထားတဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်နေရသလို နေမှာပဲ။။။။
ဖင်ကို သံရိုက်ပြီး ငါတို့ထိုင်နေခဲ့ကြဘူးတဲ့
(အိုင်တီ) နေရက်တွေက (လှည်းတန်း၊ အင်းစိန်လမ်းမရှိ အိုင်တီလက်ဘက်ရည်ဆိုင်)
ငါတို့ မျိုးဆက်တွေအတွက်လည်းပါတယ် ဗုံလုံသီးရယ်…..။
မင်းနဲ့ သက်သေထူရစေ့မယ် ဗုံလုံသီး….။
Moon Bakery ပါတယ်….
လှည်းတန်း YKKO ရဲ့ ဒေါင့်တစ်နေရာမှာ
မင်းမြို့ရိုးကို ငါ အလင်းမပေးနိုင်ခဲ့တာ
မနှစ်ကလောက် မလှတော့တာတော့ အမှန်ပါပဲ…
မင်းဆီကိုရောက်လာမယ့် နောက်နောင် နွေဦးတွေမှာတော့
ငါ့ ညီမရဲ့ နွေဦးတွေ ပီပြင်ပါစေသား….။
ဖြာကျနေတဲ့ မျှော်လင့်ချက် လရောင်ရဲ့အောက်မှာ
ဆွတ်ပျံကြည်နူးဖွယ် ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေသား……
(2009. FEB 27 23:00 PM ပြည်လမ်းမပေါ်တွင် ကားအက်စီးဒန့်ဖြင့် ဘ၀တပါးကူးပြောင်းသွားသော ညီမငယ် ဗုံလုံသီး ကောင်းရာသုပတိလားစေသား)
ရုတ်တရက်၊ ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုထဲက အပုပ်နံ့ထွက်လာတယ်။
ဒါက၊ သူ့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားစေတယ်။
အဲ့ဒီမှာ သူနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ သူ့မျှော်လင့်ချက်တချို့ ရှိနေလေရဲ့…..။
ဒါတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သူ အစားပြန်မရနိုင်တော့ဘူး။
မျှော်လင့်ချက်တွေ ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့ ဈေးလမ်းမတွေဆီ သူရောက်ခဲ့ဖူးပါရဲ့။
ပြီးတော့…. သူတို့ရဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ စားပွဲတွေပေါ်တင်ပြီး
သူတို့အားလုံး ခံတွင်းတွေ့သလောက် အဲ့ဒီညှီစို့တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို
ဘုရားသခင်က သူ့ကို ဘယ်လိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလိမ့်
သူ့အဖို့ မျှော်လင့်ချက်သေးသေးလေးတစ်ခုကို ရဖို့
သူ့ရဲ့ဦးနှောက်ကို အစားလုပ်ပြီး ရက်ပေါင်းများစွာ မျှားယူခဲ့ရတယ်။
တချို့ကိုလရဲ့ မျှောင်နေတဲ့ တဘက်ခြမ်းကနေ သူ တူးဖော်ယူခဲ့ရတယ်။
တချို့ကိုတော့ တစ်ခုထဲသော သူ့အသည်းနှလုံးနဲ့ လဲလှယ်ခဲ့ရတယ်။
အခုတော့ သူမှာကျန်ရှိသမျှ ဒီမျှော်လင့်ချက်အားလုံး ပုပ်သိုးကုန်ပြီတဲ့။
နောက်ထပ်လဲယူဖို့ သူမှာ ဘာမှမကျန်တော့ပါ။
ဈေးပေါတဲ့ မျှောင်လင့်ချက်အညှီအဟောက်တွေဆီကိုများ သူသွားရမလား။
ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ပါ။
ပွင့်နေတဲ့ ရေခဲသေတ္တာကိုကြည့်ရင်း သူရဲ့နောက်ဆုံးညစာကို
ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာ သူ စဉ်းစားနေတော့တယ်…..။
ပြတင်းပေါက်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ပြိုကျနေတဲ့ သူ့ရဲ့နန်းတော်ကို
အချက်ပြခေါင်းလောင်းသံတွေက သူ့ဆီကို အော်ဟစ်ပြေလွှားလာကြတယ်…။
မကြာခင် သူရပ်နေတဲ့ ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံး ကျွံကျသွားပေတော့မယ်…။
ကောင်းကင်မှာတော့ သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာ ရွှေတောင်ပံအသစ်တစ်စုံနဲ့
ဒါပေမယ့် သူကြည့်နေဆဲမှာပဲ မုဆိုးတချို့ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ မြားဒဏ်ရာနဲ့
သူ့ပါးစပ်က ရေရွတ်လိုက်တဲ့အခါ မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ သူ့အိပ်မက်တွေက
အခုတော့ သူ့အခန်းတံခါးတွေအားလုံး အပြီးအပိုင်ပိတ်ပစ်လိုက်ခဲ့ပြီ…
ပြိုကျနေတဲ့ နန်းတော်ဆိုတာလည်း မရှိခဲ့သလိုမျိုးပေါ့….
ပျင်းရိတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ မိုးတိမ်တွေဖြန့်ခင်းထားတဲ့ အိပ်ရာခုတင်ပေါ်မှာ
ပြီးတော့… ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ လိမ်ညာနည်းတချို့နဲ့ လုံးထွေးရစ်ပတ်ရင်းက
ရုတ်တရက်၊ သင်္ချီုင်းဂူဟောင်းတစ်ခုက သူ့ရှေ့မှာပေါက်ကွဲသွားတယ်
ရပ်နေတဲ့ သူ့နာရီတွေကလည်း ကမ္ဘာလောကရဲ့အချိန်ဆီကို
ဒါ၊ သူကိုယ်တိုင် မြေမြှုပ်သင်္ဂြီုလ်ခဲ့တဲ့
ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေတဲ့အရာတွေကို သူတို့ဘာကြောင့် တူးဖော်နေကြသလဲ…
သေဆုံးပြီးသားအရာတွေကို ဘာကြောင့်များ အသက်သွင်းချင်ကြသလဲ…
သူ တိတ်တဆိတ် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခဲ့တဲ့ သူရဲ့မှားယွင်းမှုတစ်ခုက
သူ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဖုံးကွယ်မထားနိုင်တော့ပါ။
ပုပ်သိုးနေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်များ၊ ပြိုကျနေတဲ့ နန်းတော်…
မြားဒဏ်ရာနဲ့ သူ့အနာဂတ်၊ အားလုံး သူ့ရှေ့ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြတယ်…
သူ့ကို ကခုန်ပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြတဲ့ သူ့အိပ်မက်တွေလည်း
အခန်းထောင့်တစ်ခုမှာ စုပြုံပြီး ငိုကြွေးနေကြပေါ့….။
ခါးသက်နီရဲတဲ့ အမှန်တရားဟာ သူ့ပါးစပ်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကနေ
(မှတ်ချက်။ ။ ဆရာမြင့်မိုးအောင်ရေးသားခဲ့သော ၁၉၉၀-၁၉၉၁ မှ ကဗျာများကိုစုစည်းထုတ်ဝေသည့် “အမဲလိုက်အက” ကဗျာစာအုပ်မှ “နောက်ဆုံးညစာ” ကဗျာကို ပြန်လည်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် ကိုးကားချက် ကိုဖော်ပြပြီး လွတ်လပ်စွာ ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါသည်။)
ဘုရားခေတ်က ကလေးတစ်ယောက်၏ မျက်လုံး
ဆိုဖီရဲ့ ကမ်ဘာကို ဖတ်ဖူးပါသလား၊
ဒါလီရဲ့ အရည်ပျော်နေတဲ့ နာရီတွေကို
လမ်းပေါ်မှာ ဆာလောင်နေတဲ့ ကလေးတွေနဲ့
ဒီနေ့တော့ ၁၀၉၊ ၁၁၀။
(၂၆) နှစ်လုံးလုံး ပြည်သူတွေကို
အရာရာဟာ လူသားဆန်စွာ ကျဆုံးခဲ့ပြီ…။
ဘာတွေကို ဘယ်လို ထုတ်လုပ်ပြီး
ကိုလံဘီယာ ကုတ်ကင်းဘုရင် ကားလို့စ်က
မကြာခဏ ချောင်းကြည့်တတ်တဲ့ မျက်လုံးတစ်လုံး၊
အကြောက်လွန်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို အားမရဘူး…။
ခေတ်ကို ဦးဆောင်သော ကဗျာများနဲ့
(မှတ်ချက်။ ။ 2009 ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်၊ အမှတ် (၂) အတွဲ (၁) “လှိုင်းသစ်” မဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသော ဆရာသော်ဒီဝေ၏ ဖြောင့်ချက်အနှေး ကဗျာကို ပြန်လည်တင်ပြ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
အဆက်စပ်မဲ့တဲ့ ဘ၀တွေကလို့ အော်လိုက်
ဘယ်လိုသာယာနေတယ် ကိုယ်မသိတော့ဘူးလို့ အော်လိုက်
ကုန်ဖလှယ်သလို ဈေးကစားပြီး မင်းဘ၀ကိုဆောက်တည်လို့
(မှတ်ချက်။ ။ 2009 ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်၊ အမှတ် (၂) အတွဲ (၁) “လှိုင်းသစ်” မဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသော ဆရာကြည်ဇော်အေး၏ ကိုယ်တို့ခေတ် ကဗျာကို ပြန်လည်တင်ပြ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ဟောဒီ ဂုဏ်သရေရှိ ကျေးလက်မှာ
ထောပတ်ပဲပြု ငရုတ်သီး ငပိထောင်းစစ်စစ်နဲ့
(မှတ်ချက်-၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်၊ အတွဲ (၂၃)၊ အမှတ် (၂) “ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဖင်း” တွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော ဆရာမောင်စိမ်းသစ်၏ “ဒီနေ့ကျေ်းလက်” ကဗျာကို ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ရေဦး မူးရေမှာ ရေတွေကူးခဲ့ကြ
နာရီစင်၊ ပန်းခြံ၊ ဈေး
(မှတ်ချက်။ ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်၊ အတွဲ (၂၃)၊ အမှတ် (၂) ရုပ်ရှင်တေးကဗျာရသစုံမဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
ဘ၀တစ်ပါးက မိတ်ဆွေဆီ စာရေးလိုက်…
(မှတ်ချက်။ ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ်၊ အမှတ် ၂၇၀ ၊ မဟေသီမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော ဝေမှူးသွင်ရဲ့ လူစိမ်းကဗျာကို ကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ မူရင်အတိုင်း ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။)
အလွမ်းတွေ ပန်းဖြစ်ဆိုတာ အဝေးကြီးရှိသေးတယ်….။
အနိစဆိုတဲ့ မမြဲခြင်းတရားရဲ့ ရှေ့က
(2008 ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 16 ရက် ချင်းမိုင်မြို့ရဲ့ ညတစ်ညမှာ စိတ်ကူးပေါက်ရာ ရေးသားမိခဲ့းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
နားမှာ ရိုက်ခက်နေတဲ့ ပန့်ခ်ဂီတတွေ….။
(ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ရှင်သန်ကျင်လည်လျှက်ရှိကြတဲ့ ခေတ်ပြိုင်လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ကို သရုပ်ဖော်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဗျာဟာ လူငယ်အားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုပါ။)
မိုးမှုန် နှင်းငွေ့ တိမ်
သူတို့ ပြန့်ကျဲလို့ ပျယ်လွင့်သွားလိုက်
သူရသတ္တိရဲ့ အလင်းရောင်ကို ချစ်
ယုံကြည်ချက် ပြင်းပြသူတွေကို ချစ်
တကိုယ်တော် ခရီးသည်ကို ချစ်တယ်…..။
တနေ့မှာ သေဒဏ်ပေးခံရမယ့် အတိုက်အခံသမား
လူမိုက်များရဲ့ ချစ်သူ ချစ်တဲ့လူ….။
ကျနော်ကို တိုးလိုက် ဝှေ့လိုက် မြူးလို့….။
(၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ‘၀’ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်းအထူးမြို့နယ်၊ ကာဝိုင်းဒိုင်နယ် ဒိုင်နယ်ရုံးတွင် ရေးခဲ့သည့် “အချစ်ညနေရီ” ကဗျာကို “မဟူရာမေတ္တာရှင်၏ တော်လှန်ရေးစာပေမှတ်တိုင်” စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြထား ခြင်းဖြစ်သည်။)
အမေနဲ့မဝေးကွာလှတဲ့ ဆေးရုံကြီးရှေ့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ
ပုဆိုးစိမ်းစိမ်း အင်္ကျီဖြူဖြူ သားသားလေတွေ။။။
ကျုပ်လို လူမိုက်ကြီးတွေရဲ့ ရင်ထဲ
ဒေါသပေါက်ကွဲနေတဲ့ ဆင်ရိုင်းကြီးတွေ အောင်းလို့…..
ကြမ်းရမ်းတဲ့ ပွဲခင်းရဲ့ ဗဟိုမှာ….။
ဆို့နစ်စွာနဲ့ တိုးတိတ် တိမ်ဝင်သွားလေရဲ့
မှောင်မဲနေတဲ့ ကွန်မြူနစ်ခန်းမကြီးရဲ့ အလည်မှာ
ကတ္တရာလမ်းမပေါ်က ဂျူလိုင်ညနေ မိုးရေစက်တွေထဲမှာ
လူကလေးတို့ရဲ့ ၀ိညာဉ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကလေးတွေ….
၀ဲကာ ဝေ့ကာ ကျလာနေတယ်လေ….
(မှတ်ချက်။ ။ 1988၊ ဇူလိုင်လတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသ “တပ်မဟာအဆင့် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးကေဒါ” ကျောင်းမှာ ကျော်ဇောဦး ဦးစီးထုတ်ဝေသောကဗျာစာအုပ်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုကဗျာစာအုပ်သည် 1988 လူထုတိုက်ပွဲကြီးအား ကြိုဆိုဂုဏ်ပြု ဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်။ ထိုကဗျာအမည်သည်လည်း မေ့ကျန်နေခဲ့ပြီး မူရင်းကဗျာလည်း မပါရှိတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ရေးဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် မူရင်းနှင့် အနည်း အပါး အတိမ်းအငဲ့ရှိပေလိမ့်မည်။)
လူသံ၊ လှည်းသံ၊ တောလုံးညံကာ
(ဆရာမောင်လင်းကြည်ရဲ့ “မကြာမီ…..ရွာဆီရောက်တော့မည်” ကဗျာကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်၊ အမှတ် (၁၃) ကဗျာမှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြေထားပါသည်။)
ဧရာမ သစ်မြစ်ဆုံကြီးကို မိသားစု မီးညှီလှုံကြရင်း
စစ်အတွင်းတုန်းက ဗုံးကြဲဖို့လာတဲ့ ကျွဲညီနောင်
ရွာပေါ်ဝဲရင် ရှောင်ရ ရှားရပုံတွေ
အမဲသားမစားဖို့၊ အရက်မသောက်ဖို့ မေတ္တာစာ
အမေက မနက်ဖြန် ဆွမ်းလှည့်ဆိုပြီး
ပဲဟင်း၊ ပဲတီချဉ်ဆို မကောင်းလား
အိမ်မိုး၊ တဲမိုး၊ ကြိုးကျစ်ရောင်းလို့ရပြီဟဲ့….။
ကျုပ်လဲ ထန်းပင်တွေ စိုက်မယ်….။
(ကိုရွှေညာကြီးရေ…. ကျွန်တော်ခင်ဗျားကဗျာလေးကို ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် (၁၃) ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၀၇ မှာတွေ့လို့ ကူးပြီး ကျွန်တော့်ဘလော့ခ်ပေါ် တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ ၀င်ကြည့်ဖြစ်လို့ တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်ဒီလို တင်ထားတဲ့အတွက် ခင်ဗျား စိတ်ဆိုးမယ်မထင်ဘူးဗျာ။)
ဘ၀ရဲ့ခါးသီးတဲ့ခြောက်လှန့် မူ
မမက်ပဲမက်ခဲ့သလိုနဲ့အိပ်မက်အတု
ေ၀၀ါးခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာခပ်လျလျ
ငါ့မျက်လုံးတွေက ဖွင့်ထားရဲ့ နဲ့ မမြင်ခဲ့
မယုံရဲပါဘူး ဘာကိုမှငါမယုံရဲ ခဲ့ဘူး
ချိုမြိန်မူကင်းတဲ့ နေ့ ရက်များကို
ငါမုန်းတီးကြောက်ရွံ့ မိပါရဲ့ 
ခြားနားမူရဲ့တစ်စိမ်းဆန်ခြင်းက
ဘာဆိုဘာမှမသိ ခံစားမူမဲ့ခဲ့ပေါ့ ……..
အလွမ်းတွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု
အလွမ်းတွေ ကန့် သတ်နေရင်းနဲ့ ကို
အေးစက်စက် ဆွတ်ပျံ့ ခြင်းတွေထုံလွမ်း
မရှိမဲ့ရှိမဲ့ သတိရခွင့် လေးကိုလည်း
အလွမ်းမဲ့ ဇုံတစ်ခုတော့….. ချစ်သူရယ်
သံစဉ်မဲ့ သတိရ ခြင်းတွေက
ဥတုတွေကို ပြတ်ရွေ့ စေခဲ့ပေါ့
ချိုမြိန်တဲ့ ကွဲလွဲခြင်းတွေနဲ့ အတူ
ငါက… မင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ
ငါ့ကဗျာတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို
” ၁၃ ” ရက်ဖွား မွဲမွဲမှိုင်းမှိုင်းတစ်ကောင်ကို
ငါ ကြေကွဲရပါတယ် ။
ငါ ကြေကွဲတယ် ။
တို့ကို နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ …..ဆိုပေမယ့်
အလွမ်းမှတ်တိုင်တွေသာ စိုက်ထူချင်နေတဲ့ကောင်ပါ ။
ကိုယ်တိုင် ကပြခဲ့တဲ့ ဇာတ်တော်ထဲမှာ
လမင်းတွေ အစင်းစင်း လင်းခဲ့
ပန်းခင်းတွေ တညှင်းညှင်း သင်းခဲ့
ရန်ငြိုးမဲ့ဖြတ်စာမှာ သံယောဇဉ်တွေ ဝေေ၀ဆာဆာ
ငါ မောရရဲ့ ။
ပျော်ပါးဖို့ ၊ မော်ကြွားဖို့ရာ ဖယ်ရှားပေးပြီး
ငါ ပြန်ခဲ့တယ် ။ ။
နင် သွားရမဲ့ ပန်းတိုင်လေးဖြစ်ချင်တယ်….
ရင်ခုန်ခြင်းဆိုတာသေဆုံးနေခဲ့ ။ ။
ငါ …………အခုထိအမှတ်ရနေရဲ့ ။ ။
ပြစ်တင်ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ မိပေါ့ ။ ။
စိတ်အမာရွတ်တွေရှုပ်ပွနေဆဲ ။ ။
ချစ်သူရေ ! ! !
အများလိုမသောက်ပါရစေနှင့်တော့ ။ ။
13 thoughts on “ကဗျာ”
အစ်ကိုရေ….ကဗျာတွေနည်းနေတယ် …..လုပ်ပါဦး…ကျွန်တော်လဲပို့ပေးဦးမယ် ။
Posted by ဥက္ကာ | October 26, 2008, 2:38 am
Posted by khinpyi | December 20, 2008, 9:31 am
စာဥ လဲခုချိန်မှာ ကြည့်ဖို့မအားပဲ
ချက်ဖို့အားခဲနေတဲ့ထဲ ပါနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကဗျာဆရာရယ်
Posted by ယံယံ | December 23, 2008, 6:55 am
Posted by နှင်းစက် | March 20, 2009, 2:51 pm
Posted by ကလျာ | June 23, 2009, 1:03 pm
Posted by ကိုလင်း | October 18, 2009, 2:42 pm
i really like that god damn poem
haveanice girl fri
Posted by htoomyataung | December 3, 2009, 4:54 am
Posted by maylay | June 6, 2010, 3:48 am
ကဗျာတွေက နည်းတယ်နော်…ဒါပေမဲ့ တင်ထားသမျှကဗျာတွေကိုအကုန်ကြိုက်တယ်..နောက်ထပ်တင်ပေးပါနော်…..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Posted by maylay | June 12, 2010, 2:20 pm
All people deserve good life and mortgage loans or term loan will make it much better. Because people’s freedom relies on money.
Posted by CharityBERG | July 13, 2010, 5:03 am
All the porms are so nice.But i woult like to read to BOGYOKE AUNG SAN porms. Please find and send for me. Thank.
Posted by Aung San Tun | February 23, 2011, 1:01 pm
ကဗျာတွေလာဖတ်ပါတယ် …အမြတ်နိုးဆုံးက ကဗျာတွေထဲက
Posted by newday | April 2, 2011, 6:38 am
ဆရာမောင်ခိုင်မာ ရဲ့ကဗျာတွေ ရှိရင်တင်ပေးပါအုံး
Posted by konay | April 16, 2011, 5:46 am